Sary an-drindrina vaovao ao afovoan-tanànan’i Kingston mitondra hazavana ao anatin’ny haizin’ny COVID-19 any Jamaika · Global Voices teny Malagasy
Sary an-drindrina vaovao ao afovoan-tanànan'i Kingston mitondra hazavana ao anatin'ny haizin'ny COVID-19 any Jamaika
Fampiasambola amin'ny talenta tsy misy fangarony, kolontsaina sy lovan'ny firenena'
Voadika ny 28 Febroary 2021 11:55 GMT
Topimaso an'ireo sary an-drindrina eny an'arabe nataon'ny Kingston Creative. Sary nopihan'i Stuart Reeves, natolotry ny Kingston Creative, fampiasàna nahazoana alàlana.
Ny 10 Martsa 2020 i Jamaica no nanamafy ny fisian'ny tranga voalohany COVID-19 tao aminy. Nanomboka tamin'izay andro izay, voadona mafy tokoa ny toekarena tao Jamaika, iraisany tamin'izao tontolo izao. Voadona mafy manokana ny seha-pamoronana, izay nanomboka nampiseho “laingo maitso” marobe talohan'ny niparitahan'ny COVID-19, saingy niroso hatrany noho ny fisian'ireo hevitra vaovao, fanohanana ara-bola ary ireo fanahy matanjaky ny fandraharahàna.
Andrea Dempster-Chung, tale mpanatanteraka ao amin'ny Kingston Creative, fikambanana iray tsy mikatsaka tombony ara-bola, izay niteny niaro ilay sehatra, nilaza tamin'ny Global Voices hoe:
Sarotra ny hieritreritra momba ny 2020 ka tsy hiaiky ny maha-henjana ny dona niaretan'ireo olona mahay mamoron-javatra ao Jamaika. Tsy misy afa-tsy ireo mahay mamorona sy ireo mpandraharaha izay mivelona amina fampisehoana, fiakarana an-tsehatra, vokatra feno fahaiza-mamorona na fitetezana ary ny lova ara-kolontsaina ihany no afaka tena hahatakatra ny fiantraikan'iny taona iny amin'ny resaka ara-bola, ary hatramin'ny ara-tsaina mihitsy aza. Ireo mpamoron-javatra, izay ara-tsosialy izy ireny efa hamaivanina sy matetika miasa mitety kaonseritra, dia tena nosakanana tanteraka.
Kanefa, namaly bontana ireo tia famoronana nahajoro hatrany tao Jamaika. Taorian'ilay “dona” voalohany nateraky ny fihibohana voalohany tao amin'ny firenena, hoy i Dempster-Chung, tapa-kevitra ny Kingston Creative ny hiroso miaraka amin'ilay Artisan Collective Store avy ao aminy sy ny Creative Hub. Ny Jona 2020 izy ireo no niaraka nisokatra, nanome ny zavatra rehetra ho an'ireo habaka vaovaon'ny famoronana ao afovoan-tanànan'i Kingston, toeran'ny fivarotana antsinjarany ka hatramin'ny fampanofàna habaka fiarahana miasa sy studio fikiràna nomerika / famokarana podcast ary loharanom-pamoronana hafa:
Noararaotinay[…] ireo arabe mangina mba hananganana rafitra hazo sy hanatontosàna ireo sary an-drindrina ary taokanto lehibe kokoa eny an'arabe, manitatra araka izany ny tetikasa fanaovana peta-drindrina […] izay mamaritra ny atao hoe Distrikan'ny Taokanton'ny Afovoan-tanànan'i Kingston.
Nandritra ny dingana farany tamin'ilay tetikasa “Lokoy ny Tanàna”, nanao fifanarahana tamina Jamaikàna miisa 10 ny Kingston Creative hanao andiana sary an-drindrina tao amin'ny faritra Water Lane ao an-tanàna.
Nanampy ara-bola an'ilay asakanto ny orinasa Tourism Enhancement Fund sy ny Sherwin-Williams mba hahatontosa ilay hetsika, izay tohanan'ny “Kingston and St. Andrew Municipal Corporations” sy ny Ministeran'ny Kolontsaina, ny miralenta, ny fialamboly ary ny fanatanjahantena, iray amin'ireo 50 nanorina voalohany tao amin'ny UNESCO ny Creative City of Music.
Mba ho avotr'aina ho an'ireo mpanakanto, mpandihy, mpiangaly mozika ary mpanoratra tao, sy hamokatra asa vaovao dia nahazo tosika goavana tamin'ny alàlan'ny fiarahana miombon'antoka tamin'ny Inter-American Development Bank (IDB) ireo ezaka nataon'ilay fikambanana tsy mikatsaka tombony ara-bola. Milaza i Dempster-Chung fa nanampy betsaka mba hanànana 2021 mamiratra kokoa io:
Nambaran'ny Firenena Mikambana ho Taona Iraisampirenena ho an'ny Fahaizamamorona ara-Toekarena sy Fampandrosoana Maharitra ny 2021 ary nankatoavin‘ny Inter-American Development Bank ny hanaovana fiarahamiasa amin'ny Kingston Creative mandritra ny telo taona, mitentina an-tapitrisa dolara maro, antsoina hoe CREATECH.
Io fiarahamiasa amin'ny IDB Lab io dia hanome teknolojia filonana, sehatra nomerika vaovao ary hanatsara ny fahafahana miditra amin'ny tsena iraisampirenena ho an'ireo [Jamaikàna] mahay mamorona. Amin'ny alàlan'ny Creative Hub no hanatanterahana ilay fandaharanasa[…] fampidirana ho amina tetikasa vaovao ara-barotra sy fanamafisana ny fahaizamanao mba hampiroboroboana ny rafi-piainana voajanahary, handrafetana fandraharahàna misy fahaizamamorona ary hanomanana sahady azy ireo hàka tombony amin'ireo fahafahana marobe vaovao
Ho an'ny firenena iray toa an'i Jamaika, inoany fa, “miaraka amina talenta marobe tsy misy fangaro, kolontsaina ary lova tahaka izany,” dia mariky ny fanantenana goavana io fampiasambola io. Nandritra ireo vanimpotoana sarotra nateraky ny valanaretina, nitondra angovo lehibe sy fientanentanana tao afovoan-tanànan'i Kingston ireo sary an-drindrina, ary nanoritra ny làlana mankany amin'ny hoavy mamiratra kokoa. Jereo anie ireto izy e, arahan'ny fanambaràna avy amin'ireo mpanakanto eto ambany.
Hatsaràna anaty valanaretina iray
Sary an-drindrina nataon'ilay mpanakanto mipetraka ao Jamaika, Rebecca Levy. Sary avy amin'i Stuart Reeves, fanomezan'ny Kingston Creative, fampiasàna nahazoana alàlana.
“Olona misaron-tava no asehon'ilay asakanto—mirakotra toy ny fehezam-boninkazo ilay sarontava—tsy eo ny tadiny, saingy mety ho malefaka sy toy ny rambon-damba izy ireny. Nihevitra aho fa sady afaka hitondra fanazavàna momba ireo olan'ny filaminana ateraky ny COVID amin'izao fotoana izao izy ireny, nefa koa mampiditra hatsaràna bebe kokoa sy singa maro miendrika voninkazo mamaky sy mitondra rivo-baovao ho an'ny [habaka vita] simenitra manodidina azy.” – Rebecca Levy
Sary an-drindrina nataon'ilay mpanakanto mipetraka ao Jamaika, Richard Smith. Sary fanomezan'ny Kingston Creative, fampiasàna nahazoana alàlana.
“Artista mpanao zavatra toy ny tena izy, ny asako dia maka tàhaka sy mibahan-toerana ao anatin'ny lova ara-kolontsaina, ary ny fomba fanao nentin'ireo razambenay niatrika ny fahasahiranana mba hahatonga an'i Jamaika hahaleo tena. Ity sary an-drindrina ity, tamin'ny alàlan'ireo andiana loko marevaka, dia manome angovo, aingam-panahy ary tanjaka ho an'ny vondrom-piarahamonina ao Water Lane sy ny manodidina azy amin'ny maha-fanehoana ny fahalalahana maneho hevitra azy. Nanao sorona ny fiainany manontolo io vehivavy io ary ankehitriny afaka miaina hasambarana. Tantaran'ny fiaretana, fikirizana ary fahalalahana.” – Richard Smith
Fanomezam-boninahitra ny ‘Toots’
Sary an-drindrina nataon'ilay mpanakanto mipetraka ao Jamaika, Joshua Solas. Sary fanomezan'ny Kingston Creative, fampiasàna nahazoana alàlana.
“Frederick Nathaniel ‘Toots’ Hibbert dia tsy hoe fotsiny mpisava làlana ny reggae fa endrika iray ho an'ny kolontsaina koa. Fantatra tamin'ny naha-olona tsara fandray azy izy, ary iray niahy ny vahoakany. Nanana dindo ara-kolontsaina nentiny nandritra ny fotoana ela niasàny izy, izay mihoatra lavitra noho ny mozika[ny]. Tamin'ny fampiharako, tiako ny mampiasa ireo lahatsoratra na sary amin'izao fotoana izao, notsoahana avy any anaty gazety mba ho entina mampivoitra ny fotoana sy ny fifandraisany amin'ilay olona na zavatra; ny fampiasàna ireny lahatsoratra ireny dia mety ho fomba iray goavana hanasongadinana ny lova navelan'i Toots. Na tsy eto anivontsika intsony aza izy, ho velona eo lalandava ny mozika sy ny lova napetrany.” – Joshua Solas
Sary an-drindrina nataon'ilay mpanakanto mipetraka ao Jamaika, Zohria Allen. Sary fanomezan'ny Kingston Creative, fampiasàna nahazoana alàlana.
“Ny tefiendrika ataoko dia avy amin'izay zavatra niainana manokana sy ny fandinihana amin'ny maha-mpanabe. Asehon'ilay sary hosodoko ireo ankizy ao anatin'ireo vondrom-piarahamonina ao afovoan-tanàna, miatrika toedraharaha manahirana no sady […] miady amin'ireo olana ara-piarahamonina toy ny fahantràna, ny heloka bevava, ny fahabangan'ny iray ao anaty ankohonana, ary ny fihenan'ny fahafahany manao safidy miabo. Faniriako ny mba hahatonga ireo sary an-drindrina ho mpitondra teny entina mitaky ny fiarovana sy ny fihazonana ireo zo sy fahasambaran'ny ankizy.” – Zohria Allen
Miaraka amin'io lentam-katsaràna sy fahaizamamorona ilonan'i renivohit'i Jamaika io, dia angamba mba mety ho maivamaivana ihany no hizakàna ilay valanaretina.